Myanmar Computer Industry Association ( UNDER CONSTRUCTION )
ITIL V4 Exam Preparation Course
ဆရာဦးမင်းမြတ်စိုးမိုး (ITIL V4 Certified) မှ သင်ကြားပေးမည့် ITIL V4 Exam Preparation Course ကို ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၅,၁၆) ရက်နေ့များတွင် နံနက် (၉:၀၀) နာရီမှ ညနေ (၃:၀၀) နာရီအထိ ဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဤသင်တန်းကို ITIL Foundation V3 နှင့် V4 သင်တန်းတက်ရောက်ပြီးသူ သင်တန်းသား/သူများ ITIL best practices များနှင့် လုပ်ငန်းခွင်တွင် အတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၃) နှစ် အထက် ရှိထားသူများ IT Management Level တွင် အတွေ့အကြုံ (၅) နှစ်နှင့်အထက်ရှိပြီး
ITIL process များနှင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပြီး လုပ်သက်အတွေ့အကြုံရှိထားပြီးသူများကို မွမ်းမံသင်တန်း အဖြစ် စာတွေ့ (၁) ရက် နှင့် စာမေးပွဲဝင် မေးခွန်းဖြေဆိုနည်း သင်ကြားမှု (၁)ရက် ပေါင်း (၂)ရက် ကို အနီးကပ် သင်ကြားပို့ချပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
(Non-Member) သင်တန်းသား/သူအဟောင်းများအတွက် 20% Discount ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ သင်တန်းသားဦးရေကိုလည်း ကန့်သတ်ထားပါသဖြင့် အမြန်ဆုံး ဆက်သွယ်စာရင်းပေးနိုင်ပါရန်အသိပေးအပ်ပါသည်၊
**Hot Line: 01 2305034, 09 425022976
**Address: MICT Park, Building 14, Room (604) သို့ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Location: Building (14), 5th Floor, Room (604), MICT Park, Hlaing Universities' Campus, Hlaing Township, Yangon Region.
Choose Option Organization Student individual
Yangon Region Computer Industry Association (MCIA-YGN) was established withavision to help develop ICT businesses in Myanmar and officially formed on December 3, 2011. MCIA-YGN isaregional association of Myanmar Computer Industry Association (MCIA).